Semalt Uchwepheshe: Ukubalwa kwabantu website Hack Attack Futhi Impumelelo Its
Imibiko yabonisa ukuthi abaduni bezinye izizwe babesele ngemuva kokuhlaselwa kwabantu base-Australia. II-Australia Bureau of Statistics ithathe isinyathelo sokuvala phansi uhlelo ukugcina ubuqotho bemininingwane. Ngokuqhubeka uphenyo,ihhovisi libike ukuthi ifomu lokubalwa kwabantu e-intanethi laliyisisulu sezihlaselo ezine ze-DDoS ezasatshalaliswa, ngayinye yemvelo ethile kanye nobukhulu obuhlukahlukene.
uNik Chaykovskiy, iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Ephezulu i-Semalt ,uchaza ukuthi kungani izinto ezinjengalezi zenzeka.
Ukuhlasela kuzama ukwenza isayithi ingatholakali kubasebenzisi ngokuyikhukhumeza ngezinyeizicelo kunokuba zingakwazi ukubhekana nazo. Izicelo zeWebhu yolwazi zidlula iseva evumela futhi ivumela umuntu ukuthi abuke ikhasi.Noma kunjalo, ingakwazi ukubhekana kuphela nenamba ethile yezicelo. Ukulayisha ngokweqile kungaholela ekuhlulekeni okuphelele kokuphazamiseka kwesiphakeli, okwenza isayithiayitholakali okwesikhashana. Ukuhlaselwa kwe-DDoS kuncike emadivayisini amaningana asakaza emhlabeni wonke, ngakho igama "lisatshalaliswa". AmaqembuAmadivaysi axhunyiwe aziwa ngokuthi "ama-botnets" ngamunye onegciwane le-malware enikeza abaduni ukungena emuva kwisayithi besebenzisa ukufinyelela okude.
Izizathu zokusetshenziswa kweDDoS
Abaqaphi bangasebenzisa ukuhlaselwa kweDDoS ngezizathu ezihlukahlukene. Phakathi kwabo kukhona:
i-Hacktivism. Ama-Hacktivists asebenzisa ukuhlaselwa okunjalo kumibhikisho ngokumelene nezinyathelo ezithile nge-target..
ukuphanga. Izigebengu ze-Cyber ​​ziyaziwa ukusebenzisa le ndlela ukuze zithole imaliukushintshanisa ukuvimba ukuhlaselwa okuqhubekayo.
Ukuncintisana kwebhizinisi. I-DDoS kungenzeka ingabi umkhuba webhizinisi osemthethweni, kodwangezinye izikhathi asetshenziselwa ukubeka phansi noma ukubeka ukusebenza kwewebhusayithi yomqhubi.
i-Script Kiddies. Abanye abasebenzisa i-intanethi basebenzise izikripthi ezenziwe ngaphambilini ukuze zenzeke i-inthanethiimisebenzi yabanye njengabadlali.
Yini eyoqeda ama-DDoS?
Okokuqala, kufanele siqonde ukuthi abaduni kumele bazi ukuthi kungenzekaukukhubazeka kwesayithi lokubalwa kwabantu. Kungenzeka ukuthi ngenxa yethrafikhi esindayo eyadingeka. Ngenxa yalokho, isayithi liye laba ngokuyai-target for abaduni bezilwandle ukuze babonise indlela uhlelo lukahulumeni wase-Australia olujwayele ukuhlasela ngayo. Kungaba futhi impendulo yokwandaukuphawula komphakathi mayelana nokukhathazeka kwabo nokukhathazeka kwangasese. U-Andy Hurren naye waba nomuzwa ofanayo, ekholelwa ukuthi iphuzu elenziwe yiloukwehluleka ukuvikela uhlelo oluphezulu lwe-intanethi ye-intanethi. Izizathu ezigqugquzela ukuhlaselwa akuncane kakhulu ukuba yimali noma idatha, noma kunjalo.Ezinye izizathu ezikhona zinganeliseki abaduni bamazwe angaphandle abangavumelani nesistimu noma umuntu ofisa ukubonisa amakhono abo abaqaphi.
Ingabe idatha ephephile?
Ukuhlaselwa kwe-DDoS kugxila kakhulu ekuzameni kwakhe ukulimaza isayithi. Akulutholiidatha equkethwe kwisayithi. Kodwa-ke, abanye abahlaseli bangasebenzisa ukuhlasela kwe-DDoS ukuze benze okungafani, okungeke bakwazi ukuwaphonsa khonaidatha yomsebenzisi kusuka kunethiwekhi njengesihloko se-TalkTalk telecom eqinile.
Ukucabangela esikhathini esizayo
i-ABS ikholelwa ngokuqinile ukuthi isizathu esiyinhloko se-Crash site crash yi-DDoS attack.Kukhona izizathu eziningi, kodwa kusukela i-ABS inolwazi oluthe xaxa futhi uzokwazi ukuthi yini okufanele uyibuke uma unquma umthombo, nesilinganisoumonakalo. UMnu. U-Hurren, onguchwepheshe we-cyber-security wachaza ukuthi izingxoxo phakathi kwe-Australian Signals Directorate futhi ezifanelekileabathintekayo sebevele bakha. Kungaba lula ukulandelela umthombo wokuhlaselwa, kepha ubunzima bokuhlaselwa kungenzaukukhomba ngomunwe kakhulu kunabo.